The Hostess Ny Fanangonana Ny Vehivavy - Famolavolana
Ny Fanangonana Ny Vehivavy Ny fanangonam-pahaizana diplaoma Daria Zhiliaeva dia momba ny fikaonan-doha sy ny fahamaotiana, ny tanjaka ary ny fahatapahana. Ny fitaomam-bokin'ny famoriam-bola dia avy amin'ny angano taloha amin'ny literatiora Rosiana. Ny Hostess of the Copper Mountain dia mpitandrina mpitrandraka vy avy amin'ny angano Rosiana taloha. Ao amin'ity tahiry ity dia afaka mahita ny fanambadiana mahafinaritra amin'ny tsipika mahitsy ianao, araka ny fanentanan'ny aingam-panahy ny fitafiana mpitrandraka, ary ny volom-bavidin'ny volom-pirenena Rosiana tsara tarehy. Mpikambana ao amin'ny ekipa: Daria Zhiliaeva (mpamorona), Anastasiia Zhiliaeva (mpanampy mpamorona), Ekaterina Anzylova (mpaka sary)
Anaran'ny tetikasa : The Hostess , Anaran'ny mpamorona : Daria Zhiliaeva, Anaran'ny mpanjifa : Daria Zhiliaeva.
Famolavolana lamaody, akanjo ary akanjo
Ny Fanangonana Ny Vehivavy Daria Zhiliaeva The Hostess